"ကျွန်မရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ညစ်ညမ်းဆေးစွဲတာကကျွန်တော့်ဘဝကိုပျက်စီးစေခဲ့တယ်" (Times, UK) - Your Brain On Porn
ထိတ်လန်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် unexplained ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများဆက်တိုက် - မိမိဆယ်ကျော်သက်အတွက်နှစ်ပေါင်းဒံယေလ Simmons သူက "မြောက်မြားစွာပျက်တာတွေက" ခံစားခဲ့ရကပြောပါတယ်။ အနည်းငယ်ဆုတ်ခွာလျှင်မူကားအောက်တိုဘာလ 2013 အတွက် 21 ၏အသက်အရွယ်မှာ, ဥာဏ်နှင့် likeable, ဗြိတိန်ဂီတကျောင်းသားပိုကောင်းများအတွက်အံ့ဖွယ်ပြောင်းလဲမှုခံယူ။
"ကျွန်မရုတ်တရက်ပိုပြီးစွမ်းအင်ခဲ့, ငါအာရုံစူးစိုက်နိုင်" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "ငါသည်နှစ်အတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့စာအုပ်တွေဖတ်နေခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့မိတ်ဆွေတွေကိုမြင်လျှင်ထွက်ခဲ့သည်။ ငါရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအဓိပ္ပာယ်ရှိခဲ့ပါတယ်ခံစားရတယ်။ "ဒီဇင်ဘာလခြင်းအားဖြင့်, Simmons သူမတိုင်မီခံစားခဲ့ရဘယ်တော့မှချင်ပါတယ်တဲ့သန်စွမ်းနှင့်အတူနယူးယောက်တက္ကသိုလ်မှာမိမိလေ့လာမှုများပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေဒံယလေက ပို. ပျော်ရွှင်သလိုပဲကြောင်း commented ။ ပုဂ္ဂလိကပိုင်, သူတို့ကသူ Anti-စိတ်ကျရောဂါအပေါ်ခဲ့တာရှိမရှိအံ့ဩကြ၏။ သမ္မာတရားကိုဒံယလေက porn တက်ပေးထားခဲ့ကွောငျးဖြစ်ခဲ့သည်။
သူကအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှာရှာဖွေနေစတင်ခဲ့သည့်အခါ Simmons အတော်လေးနှောင်းပိုင်းတွင်ယနေ့လူငယ်များ၏စံချိန်စံညွှန်းအသုံးပြုပုံ 15 ဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအပတ်က NSPCC တစ်ဆယ်သကဲ့သို့ကလေးငယ်များစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, စိတ်ခံစားမှုများနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ယင်း၏အသုံးပြုသူများသည်၏ဘဝအပေါ်တစ်ဦးလေးနက်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုငျသောအွန်လိုင်းညစ်ညမ်း, စွဲဖြစ်လာကြပြီဟုအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏အထူးကြပ်မတ်အသုံးပြုမှုကိုတည်တည်အလွန်ငယ်ရွယ်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုထိခိုက်စေသောအကြံပြုဖို့သက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။
ငါသည်သူ၏ဆယ်ကျော်သက်အကြောင်းပြောနေတာနာကျင်ကြောင်း Simmons ရဲ့အသံကိုအားဖြင့်ပြောပြနိုင်ပါ။ သူ၏အသက်တာ၏ခြောက်နှစ်များအတွက်သူက "ထုံ" ခံစားခဲ့ရနှင့်မျိုးစုံ tabs များ အသုံးပြု. ရုံ porn ကိုကြည့် "နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုနာရီပေါင်း။ ငါနေမကောင်းချွတ်မခေါ်ပဲတနေ့လုံးအဲဒါကိုစောင့်ကြည့်ချင်ပါတယ်။ "ဒါဟာတစ်ဦးမပျော်, ကြောက်မက်ဖွယ်အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ "ကျွန်မနေတဲ့စက်ရုပ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ငါကပုံမှန်လူတွေကိုပြန်ပြောပြလို့မရဘူး။ "သူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာဒြပ်ဖြစ်လာသည်နှင့် rape- တယောက်ညစ်ညမ်းစေရန်တိုးချဲ့သူ့ကိုကြောက်သောလမ်းညွှန်များအတွက် mutated ။ နေဆဲကပိုကြောက်စရာ: အဘယ်သူမျှမအင်တာနက်ရှိ၏အမှု၌သူ့မိသားစုနှင့်အတူ "။ ငါကမကြည့်နိုင်ဘူး" ပိတ်ရက်များ, စိတ်ဖိစီးမှုခဲ့ကြသည်။ "Porn abstinence" ဟုသူခြဲ့ကားပွောမပါဘဲပြောပါတယ်, မိမိအသက်ကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။
သူသည်မိမိအရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သို့ "ညစ်ညမ်း" နှင့် "စွဲ" ရိုက်တဲ့အခါမှာ Simmons မတော်တဆမှုအသုံးပြုပုံ "porn abstinence" web ပေါ်မှာတစ်အောက်ခြေလှုပ်ရှားမှုဖြတ်ပြီးလဲ။ သူကယောက်ျားနှင့်ယောက်ျားလေးများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ "porn ပြန်လည်နာလန်ထူ" က်ဘ်ဆိုက်များ၏အကူအညီနှင့်အတူညစ်ညမ်းချွတ်သူတို့ရဲ့ဦးနှောက် "ကို restart" ခဲ့ကြသည်ကိုဘယ်လိုဖတ်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်၏ကြားဖူး, သူတို့က Reboot Nation, Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်နဲ့တူသောအရာတို့ကိုဟုခေါ်ကြသည်, QuitPornGetGirls, The New မူးယစ်ဆေးနှင့် reddit site ကို NoFap (FAP တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဘို့ဘန်းစကားဖြစ်ပါတယ်) Fight ။ "ငါကရပ်ရွာထဲမှာကိုခေါ်မယ့်အဖြစ်အော်ဂဇင်သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ full-ထွက် '' ဘုန်းတော်ကြီး mode ကို '' မပါဘဲ 100 ရက်ပေါင်းသွားလေ၏။ ကျွန်မနေ့စဉ်တွေးတောဆင်ခြင်။ ငါ CBT [သိမြင်မှုအမူအကျင့်ကုထုံး] ရတဲ့ခဲ့သည်။ ငါ့ကိုအကောင်းခံစားမိတော့တယ်, ငါသည်ရေးသားခြင်းခံခဲ့ရသည်, အားကစားခန်းမသွားခဲ့ပါတယ်။ "
ငါသည်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်များ boorish ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပေမယ့်အစားအများအပြားကိစ္စများတွင်အဲဒီမှာဖတ်ပုံပြင်တွေကိုမကြာခဏအံ့သြတွေ့ thoughtfully တင်ခဲ့သည်, စိုးရိမ်စရာများနှင့်ထို့ထက် ပို. မကြာခဏမထက်, ငယ်ရွယ်ဆယ်ကျော်သက်ကရေးသားခဲ့သည်။ porn ကိုသင်ဖိုရမ်များအပေါ်ထပ်ကာထပ်ကာဖတ်ပါလိမ့်မယ်, သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပျက်စီးခဲ့သည်။ "ငါသေသင့်တယ်တဲ့သူ့တစ်ဦးအရှုံးသမားအပိုင်းအစ *** တယ်" ဟုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အသက် 16 ရေးသားခဲ့သည်။ "ငါသည်ဤအမိန်းကလေးများအွန်လိုင်းဓာတ်ပုံများကို post များနှင့်အခြားလူသူတို့ကိုဝတ်လစ်စလစ် Photoshop ရ: တစ်ဦးက 12 နှစ်အရွယ်အမာခံညစ်ညမ်းနဲ့သူ့ရဲ့အတွက်အဆက်မပြတ် Facebook ကမှကူးကပြောပါတယ်။ ဒါဟာစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ရဲ့နဲ့ကျွန်မကသိတယျ။ "
Lekajones သူနောက်ဆုံးအပတ်တွင် NoFap အပေါ် posted စာထဲတွင်အခိုငျအမာထားပြီးလျှင် "ငါယောက်ျားတွေသုံးစွဲဖို့အတှကျအညစ်ညမ်းပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အကဖြည့်ညှင်းများတွင်အသုံးပြုလိင်များအတွက်လက်ခံနိုင်ဖွယ်အစားထိုးခဲ့ပါတယ်စဉ်းစားရန်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ NO! NO! NO! အဘယ်သူမျှမ-porn မရှိ-တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ "ခရီး" သူတို့ porn ရဲ့တွင်သင့်ဦးနှောက်ကိုစတင်ဖွင့်ကတည်းက "porn, ရက်များကိုဖကျြဆီးနှင့်သင်စိတ်ထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ကပ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှု, ရည်မှန်းချက်, မတ်ေတာအတှကျစွမ်းရည်, ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်လိင်ပွနျလညျရှာဖှတှေ့နေ ။
ဤလ, ဂယ်ရီ Wilson က, Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်ကို set up သူတစ်ဦးအငြိမ်းစားခန္ဓာဗေဒနဲ့ဇီဝကမ္မဗေဒဆရာ, ထုတ်ဝေခြင်းဖြင့်အများပြည်သူဝိညာဏ်သို့ခြေလှမ်းနောက်ထပ် abstinence လှုပ်ရှားမှုကိုတွန်းအားပေး Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်, 20,000 ထူးခြားတဲ့အသစ်ကဧည့်သည်တစ်ပါတ်ရရှိသွားတဲ့သောမိမိ porn ပြန်လည်နာလန်ထူက်ဘ်ဆိုက်၏précis။ Wilson ကယ့်ပိုက်ကွန်အပေါ်ပထမဦးဆုံးထိုကဲ့သို့သောက်ဘ်ဆိုက်ခဲ့သည်။ "Evolution" ဟုသူကပြောပါတယ်, "ဒီနေ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းများအတွက်သင့်ဦးနှောက်ကိုပြင်ဆင်မထားပါဘူး။ "
Simmons, သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်အများပြည်သူသွား၏အလွန်သတ္တိခြေလှမ်းကိုယူစေခြင်းငှါဒီလိုအားပေးအတူအကြွေး Wilson ကယ့်ဝဘ်ဆိုဒ်အပါအဝငျ "reboot" ထောင်ပေါင်းများစွာ၏။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂဏန်း၌တည်ရှိ၏" Simmons ရဲရငျ့စှာတစ် YouTube ကိုအင်တာဗျူးအတွက်ကြည့်ရှုပြောပြသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ဘက် [အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်း] ကျွန်တော်တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်ပါတယ်။ "
yourbrainrebalanced.com အပေါ်တစ်ဦးကရေဒီယို show ကိုအိမ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယိုလော့ဂ်ဂါ, သူလည်းပဲ porn ရဲ့ထိခိုက်သက်ရောက်မှုများအပေါ်တစ်ဦးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ "Porn ဤကွီးစှာသော, ပျော်စရာလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ဘုန်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဆေးလိပ်စစ်ပွဲများစဉ်းစားပါလျှင်, ဘယ်သူမှစီးကရက်ဒါအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းစိတ်ကူးနိုင်ဘူး။ "
အခုသူကဒီ Anti-porn တော်လှန်ရေးရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖွဲ့စည်းရန်သူကိုလူပျိုတို့ထောင်ပေါင်းများစွာ၏များ၏ရာပေါင်းများစွာအများအပြားနှင့်အတူဘုံထဲမှာရှိခဲ့နှင့်ဤ - - တကသူ့အတွက် shocker porn တက်ပေးခြင်း၏အဓိကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်ခဲ့: "ဒါဟာရှိရဲ့ရယ်စရာအသံစေခြင်းငှါ, ချိတ်ဆက်မှု "ဟုသူကဤသို့ဆို၏" ငါမူကားအနှစ်ရှိသောငါ၏ပထမဦးဆုံးစိုက်ထူခဲ့သညျ။
"Porn သင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အခြားလူကိုမြင်ရစေသည်။ ငါမိန်းမတို့အားပြောဆိုနိုင်ဘူးသူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားခံစားရပါဘူး။ ငါမလိင်စိတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကိုငါနှင့်အတူအိပ်ရာကိုသွားလုပ်ခဲ့တယ်အခါ, ငါအလွန်ရှက်စရာနှင့်စိတ်ပျက်ဖွယ်ခဲ့သော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောကြိမ်နှုန်းရန်သင့်ရေဒီယိုဖမ်းယူနားဆင်င့်နဲ့တူရဲ့။ "
သူကညစ်ညမ်းအပ်တစ်ဦးတရာရက်အကြာမှာသူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအစိုစွတ်သောအိပ်မက်ကိုမြင်မက်။ သူကညစ်ညမ်းနဲ့သူ့ရဲ့ပြဿနာနှင့် ပတ်သက်. မိမိအမိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုပြောကြားခဲ့သည်။ ဒါဟာကူညီပေးခဲ့သည်။ "ကျွန်မအမှန်တကယ်ငါ့အဖေ၏အလွန်ငြူစူခဲ့သည်။ သူတို့ကအင်တာနက်ကိုမပြုမီတက်ကြီးထွားလာခြင်းနှင့်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအလွန်အမင်းလှုံ့ဆော်ပစ္စည်း, သူတို့ကရှိခဲ့ဘယ်လောက်ကောင်းမသိရပါဘူး။ "
သူဆယ်ကျော်သက်များ၏မျိုးဆက်သစ်အကြောင်းကိုဘယ်လိုစိုးရိမ်နေကြပါသလဲ "အလွန်။ အငယ်, သင်သည်သင်ပိုအားနည်းချက်ရှိပါတယ်။ မြန်နှုန်းမြင့်လည်းမရှိဘယ်နေရာမှာမဆိုဘယ်မှာ, ခံစားနေရပြီးလူဦးရှိပါတယ်။ ဒါဟာ stupor ၌သင်တို့ကိုထည့်လေ့မရှိ။ ဒါဟာအရှုံးမပေးဖို့အလွန်ခက်ခဲသည်, သင်ထောက်ခံမှုတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ လူငယ်တွေက [အမျိုးသမီး porn စွဲလည်းရှိပါတယ်] သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးနေကြတယ်။ "
ငါသူနေထိုင်ရာအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်အတွက် Wilson ကကိုခေါ်ပါ။ မိမိအခြောက်ဆယ်ခုနှစ်, ဖော်ရွေခြင်းနှင့်ဖြောင့်-talk, သူသည်အဘယ်သူ၏ porn အသုံးပြုမှုမဂ္ဂဇင်းများမှအဓိကအားဖြင့်ကန့်သတ်ခဲ့သည်ယောက်ျား၏မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေလာပါတယ်။ ပြည်သူ့သေးကြောင်းနှင့်ယခုရရှိနိုင် Streams အမာခံပစ္စည်းများ၏-အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှထောက်ပံ့ရေးအကြားခြားနားသူကပြောပါတယ်လုပ်ကြပြီမဟုတ်။ ဒါဟာလိင်စွဲလမ်းတွေအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး, Wilson ကပြောပါတယ်။ ဒါဟာအဆုံးမဲ့အသစ်အဆန်းအကြောင်းကိုင်: အင်တာနက်။ "နောက်ဆုံးနှစ်ခုမှသုံးနှစ်များတွင်" Wilson ကပြောပြသည် "လို့သူတို့နောက်ဆုံးတော့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ်အကြောင်းကိုခြောက်လလေ့လာမှုများပြုမိပါဘူး။ "
သူများသည်လေ့လာမှုများ - ဆွစ်ဇာလန်, ခရိုအေးရှားနှင့်ကနေဒါနှင့်အမေရိကန်စစ်တပ်မှကောက်ယူ - 27 30-to-16 တစ်နှစ်ကြားရှိရာခိုင်နှုန်း 21 မှအကြားပညာရေးခံစားနေရပြီးခံရဖို့တွေ့ပါပြီဖော်ပြသည်။ 2013 ထုတ်ဝေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာသည်နိုင်ငံတကာလူ့အဖွဲ့အစည်းများကတစ်ဦးကလေ့လာမှု, အသစ်ရောဂါ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူလေးလူနာတဦးတည်း 40 အောက်မှာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ "အခု, နောက်ဆုံးအစစ်အမှန် Cross-Section လေ့လာမှု 1992 အတွက်အင်တာနက်မတိုင်မီထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်," Wilson ကပြောပါတယ်။ "18 မှ 60 ၏အသက်အရွယ်အကြားယောက်ျားများအတွက်ပညာရေးရာခိုင်နှုန်း5န်းကျင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာနှုန်း 600 တစ် 800 မှာရှာကြသည် porn-သွေးဆောင် ED "သူနှင့်အတူယောက်ျားဆိုပါတယ်" ။ "- အရှိဆုံးဆရာဝန်များကမတည်ရှိပါဘူးလို့ပြောရာ -" erectile function ကိုပြန်လည်နှစ်နှစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုယူနေကြသည်။ တချို့ကယောက်ျားတွေသူတို့နှိုးဆော်ခြင်းရမရနိုငျသညျ, ပြန်လည်ထူထောင်မဟုတ်ပါဘူးဟုဆိုကာနေကြတယ်။ "အောက်တွင်-18s Viagra မှလှည့်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။
ပညာရေးအပေါ်ကိုလက်ခံဆေးဘက်လိုင်းလုလင်တို့သည်၎င်း၏တိုးမြင့်တက်အဝလွန်နှုန်းသို့မဟုတ်အရက်သောက်နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်ကြောင်းရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် "fapstronauts" - no-porn မရှိ-တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစိန်ခေါ်မှုအပေါ်ယောက်ျား - ကြောင်းယုံကြည်ကြဘူး။ "ကျနော်တို့ကသာမကြာသေးမီကဦးနှောက်အပေါ်အင်တာနက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်လေးနက်သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများကြည့်ဖို့စတင်ဖွင့်," Wilson ကပြောပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုသူတို့ပြသပုံပေါ်တစ်ဦးညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါများအကြားဆက်စပ်မှု, ED, စိုးရိမ်စိတ်, ADD, လိင်အတွက်အကျိုးစီးပွားအရှုံး, အဆင့်နှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းထွက်နှုန်းကျဆင်းဖြစ်ပါတယ်။ "တစ်ဦးကဆယ်ကျော်သက်ရဲ့ဦးနှောက်, dopamine ထုတ်လုပ်မှုနှင့် neuroplasticity ၎င်း၏အထွတ်အထိပ်မှာစွဲ rewiring ဖို့အလွန်အမင်းအားနည်းချက်ဖြစ်၏။ " ထဲမှာတစ်ဦးကလေ့လာမှု အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ် ဒီနှစ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းတစ်ခုတိုးလာအသုံးပြုမှုကိုခြောက်လအကြာမှာယောက်ျားလေးများ '' ပညာရေးစွမ်းဆောင်ရည်လျော့နည်းသွားကြောင်းပြသထားတယ်။
Wilson ကသိပ္ပံပညာကရှင်းပြသည်။ အဆိုပါ neurotransmitter dopamine ရဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရည်ရွယ်ချက်, သူကပြောပါတယ်သင်သည်လှုံ့ဆော်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ "ထိုအခါ dopamine အသစ်အဆန်းများအတွက် surges ။ " ဒီအင်တာနက်ကြောင့်ထောက်ပံ့ပေမယ့်ပြန်မယုတ်လျော့စေ၏တရားမှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီတော့အတူတူခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်ပိုမိုမကြာခဏကစောင့်ကြည့်မယ့်သူ့ရဲ့တာဝန်ခံရှုံးသည်။ "အသစ်အဆန်းဝေးတစ်ခုသာကလစ်သောကွောငျ့အငျတာနကျ porn အကျိုးကို circuit ကိုအထူးသဖြင့်ဖြားယောင်းဖြစ်ပါတယ်" ဟု Wilson ကပြောပါတယ်။ အံ့အားသင့်စရာ, ကြောက်ရွံ့ခြင်း, ရွံရှာ, စိုးရိမ်စိတ် - သင်အွန်လိုင်း porn ၏ borderless ကမ္ဘာကြီးရုမ်းမင်းစဉ်တွေ့ကြုံခံစားဖို့များပါတယ်စိတ်ခံစားမှု - သင်ကပိုကြီးဦးနှောက်ဓာတုကန်ပေးဖို့ ", arousal နှင့်အတူပေါင်းစပ်။ အဲဒါကိုကိုင်တွယ်ရန်ပြောင်းလဲဘယ်တော့မှခဲ့သည်ဆုချလှုံ့ဆော်နေတဲ့စူပါရန်န့်အသတ်လက်လှမ်းရှိပါတယ်သည့်အခါလုပ်ဖို့ဦးနှောက်ကဘာလဲ? ဒါဟာ adapts ။ "တစ်ဦးက Pavlovian စူပါမှတ်ဉာဏ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ "သင်၏အရသာတင်းမာမှုများလျော့ပါးစေရန်, တစ်ချိန်တည်းမှာသငျသညျ desensitised ဖြစ်လာစေရန်နှင့်ထုံခံစားရပါတယ်။ "
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတစ်ဦးကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကလေ့လာမှုမူးယစ်ဆေးစွဲထဲမှာရှိသကဲ့သို့မိုးသည်းထန်စွာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အတွက်တူညီတဲ့ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘာသာရပ်များရာခိုင်နှုန်း 50 ထက်ပို - သူတို့ရဲ့ပျမ်းမျှအသက် 25 ခဲ့သည် - အခက်အခဲခံစားမှုနှိုးဆော်ခြင်းသို့မဟုတ်အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်နှင့်အတူစိုက်ထူရတဲ့ခဲ့သည်။ Wilson ကအကြောင်းပြောနေတာသည်ဦးနှောက်သိပ္ပံသူမက "Facebook ကဖုတ်ကောင်" အကြောင်းကိုသတိပေးခဲ့သည်သည့်အခါသိပ္ပံပညာရှင်ဆူ Greenfield နှစ်ခုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအဘို့အပစ်ချခံခဲ့ရအဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ "ထိုအခါဆူလုံးဝလက်ျာဘက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ "
ပြန်လည်ထူထောင် porn စွဲသူတို့နှင့်အတူသွားကြဖို့မှတ်မိလွယ်တဲ့ကြွေးကြော်သံနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဝေါဟာရဖန်တီး: "သင်သာfင့် *** ကိုယ့်ကိုကိုယ် ed", "ဘဝအပေါ်အသစ်တစ်ခုကိုချုပ်ကိုင်ထား Get", "Porn ချစ်ခြင်းမေတ္တာဦးသေဆုံး" ။ ၎င်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ: သူတို့ PIV (လိင်အင်္ဂါအတွင်းလိင်တံ - အစစ်အမှန်မိန်းမနှင့်လိင်) ကိုခံစားနိုင်အောင် PMO (porn တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအော်ဂဇင်) အထိပေးကမ်းခြင်းဖြင့် "procrasturbation" ကိုကျော်လွှားရန်။ ပထမတော့ "Fapstinence" ဤလူတို့သညျအဘို့အချည်းနှီးပါပဲ။ Wilson ကအင်တာနက်ကိရိယာများပေါ်တွင်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု apps များ install လုပ်အကြံပြု; ဝါသနာသို့မတရားသောလွှဲလိုက်ခြင်းနှင့်ပိုပြီးထွက်လာပြီ: "။ အထီးကျန်ခြင်းသွေးဆောင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်" Relapse ဘုံနှင့်မနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ "မကောင်းပါတုပ်ကွေးကဲ့သို့ရောဂါလက္ခဏာ," တဦးတည်းလုလင်ကိုကတင်ပြထားပါတယ်။ "ကျနော့်လည်ချောင်းအရူးနဲ့တူခဲ။ စိတ်ကျရောဂါ။ ငါကအနက်ရောင်ထဲမှာအရာအားလုံးကြည့်ပါ။ ဒါဟာနီးပါးငါ့အသက်ကို၏အဆိုးဆုံးနေ့ကနဲ့တူရဲ့။ ကြောက်လန့်, စိုးရိမျ။ ။ ငါ့စကားသံကို f-ed တက်ဖြစ် "ဒါပေမယ့်ရှိပါတယ်" NoFap Academy "သင် join နိုင်သည်"! ဤနေရာတွင် NoFap ရဲ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ-အခမဲ့ဧပြီလ 2015 sign up ပြုလုပ်ပါ "
UnoroginalNam3 သည်သူ၏ NoFap စိန်ခေါ်မှုသို့ 14 အသက် 42 ရက်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ "ငါသည်တိုးမြှင့်စွမ်းအင်, ယုံကြည်မှုနှင့်တုံ့ပြန်မှု / Co-ရာ၌ခန့်အပါအဝင်အမှုအရာတွေအများကြီးသတိပြုမိပါတယ်။ သို့သော်ယနေ့ငါဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကြောင့်အားလုံးလက်သံ။ ကျနော်တို့အကောင်းတစ်ဦးချက်တင်ခဲ့နဲ့ကျွန်မသူမ၏အရေအတွက်ကိုတယ်, ငါကြိုက်နှစ်သက်သည့်မိန်းကလေးတစ်ဦးမှပြောဆိုသော။ ငါနောက်ကျောငါဖြစ်ဖို့အသုံးပြုဘယ်လိုသွားရတော့မှပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်တော့မှမ။ "အခြားသူများကအလုပ်, မှတ်ဉာဏ်, ပင်၎င်းတို့၏ဆံပင်၏အထူနဲ့သူတို့ရဲ့မျက်စိရောင်ခြည်မှာသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်တိုးတက်မှုသတင်းပို့ပါ။ အတော်များများဟာသူတို့ရဲ့အသံတွေကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းကြသည်ဟုဆိုသည်။ "ငါသည်နောက်ဆုံးတော့ငါ့အသက်ကိုနှင့်အတူထိုက်တန်တစ်ခုခုလုပ်နေတယ်နဲ့တူငါခံစားရတယ်" Siroop ရေးသားခဲ့သည်။ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဘဝမှာလုံးဝဆီလျှော်သည်အထိ "ဒီစစ်တိုက်တိုက်ခိုက်နေ Keep! ခိုင်မာတဲ့, လူတွေနေပါ။ "
ငါသူဒီနေ့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ခေါင်းနှစ်လုံးနေကြသည်ထင်ဘယ်မှာ Wilson ကမေးပါ။
"သင်ကျနော်တို့ဂျပန်များ၏ဦးတည်သွားနေသလားဆိုတာကိုစဉ်းစားမိမှရရှိပါသည်" လို့သူကပြောပါတယ်။ တစ်ဦးကဂျပန်လေ့လာမှု porn ပိုမိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်စျေးသက်သာသောကွောငျ့ဂျပန်ယောက်ျားရာခိုင်နှုန်း 10 အစစ်အမှန်လိင်မစိတ်ဝင်စားမှုရှိသည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ "porn ဆင်းကိုယ်ဝန်အတွက်အချက်တစ်ခုလား? ဒါဟာငယ်ရွယ်ယောက်ျားတွေ '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသတ်ဖြတ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ယောက်ျားတွေသူတို့လိင်စိတ်ဝင်စားမှုကိုဆုံးရှုံးကြောင့်သူတို့ကြောက်တယ်ဖြစ်ကြောင်းပြောပါနားမထောင် - စစ်မှန်သောဆက်ဆံရေးကိုယောနိတစ်နေ့၏ 300 ရုပ်ပုံများနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်မနိုင် "အိန္ဒိယအတွက်နှစ်ဦးယောက်ျားလေးများပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Wilson ကဆက်သွယ်မေးမြန်း, ထိတျလနျ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလေးအပေါ် logging တွေ့ရှိခဲ့ကြသတည်း။ ညစ်ညမ်းဆိုဒ်များ။ အခြားသူများကသူတို့၏ဒြပ်နှင့်လွန်ပြီးအိမ်မက်ဆန်အသစ်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာအားဖြင့်နှောင့်အယှက်နေကြသည်။ "Tentacle porn ကြီးမားတဲ့တဦးတည်းဖြစ်ပါတယ်" ဟု Wilson ကပြောပါတယ်။
tentacle porn ကဘာလဲ? "Hentai porn ။ သင်သည်သူတို့မိကျောင်း, ဧရာ octopuses ကဲ့သို့သောအရာများရှိဒါကာတွန်းမိန်းကလေးများနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံ, ဂျပန်အတွက် penises နှင့်ယောနိကိုပြလို့ယူဆတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ပင်ဝေးကွာအစစ်အမှန်ဘဝကနေဖွင့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါက ပို. ပင်စိတ်ပျက်ဖွယ်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲသူတို့အနေနဲ့စိုက်ထူမရနိုင်ပါ။ အလွန်ထိတ်လန့်နေသောထွက်ရှိယောက်ျားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ တချို့ကသတ်သေကြသည်။ သူတို့ဟာသူတို့ဘဝအတှကျပကျြစီးနေတဲ့ထင်ပါတယ်။ "
"ကျွန်မယောက်ျားတွေအများကြီးပေါ်မယ့်အဘယ်အရာကိုနားမလည်ကြဘူးထင်ပါတယ်" ဟု Simmons ကပြောပါတယ်။ "? Porn ပုံမှန်အရာအဖြစ်ရှုမြင်သည်ဘယ်လိုကျန်းမာရေးအန္တရာယ်နိုင်ပါတယ်" တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေလူငယ်ယောက်ျားလေးများကိုနားထောငျ, ထကြီးထွားလာ၏ကျန်းမာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါသည်: "သင်၏ဆီးကျိတ်အဘို့ကောင်းသော" ကလည်းပါမယ်သင်ပြောင်သွားရပ်လိုက်နိုင်သည်။ သို့သော်လုလင်တို့သည်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်အမာခံညစ်ညမ်းအကြားခွဲခြားမရကြဘူး။
"ကျနော်တို့ကတစ်စုံ Bond မျိုးစိတ်ပါပဲ။ ကျနော်တို့မေတ္တာ၌ကရြောကျ, "Wilson ကသူအကြောင်းပြောနေတာဘာအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိသည်သောသူထွက်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများသတိပေးနေပါတယ်။ "လူနောက်ကွယ်မှ porn အရွက်တဲ့အခါသူအစစ်အမှန်မိတ်ဖက် pixels နဲ့ရှာဖွေနေခြင်းထက်အများကြီးပိုကောင်းဖြစ်ကြောင်းသိထားသညျ။ "
Porn တွင်သင့်ရဲ့ဦးနှောက်: အင်တာနက်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်စွဲလမ်း၏ထွန်းသစ်စသိပ္ပံ, ဓနသဟာယထုတ်ဝေရေး, £ 9.99 ။ ဒံယလေသ Simmons ရဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်မြင်အကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာရန်: indiegogo.com/projects/rewired-how-pornography-affects-the-human-brain
12 မှာ Published: 01AM, ဧပြီ92015Or
@YourBrainOnPorn တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် @YourBrainOnPorn အွန်လိုင်းနဲ့ tweeting လုပ်နေတုန်းပါပဲ။ @ ဆိုပေမယ့်NoFap အသင်းက Gary Wils ကို လွမ်းတယ်... t.co/MtDLbVnsze